चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ३४ करोड ३४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८६ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १८ करोड ४४ लाख नाफा कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ७८ लाख २९ हजार खराब कर्जा उठाएकाले र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । हाल कम्पनीको पूँजी रू. २ अर्ब २० करोड छ । साथै, कम्पनीले १७ दशमलव ३५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको पुस ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । २४ हजार ८ सय ८९ कित्ता खरीद गर्ने र १५ हजार ३ सय ६१ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-04-28 - 88 view(s) - abhiyan